विगतमा गरेका काम र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा विजयको आधार : रामजनम चौधरी(अन्तरवार्ता) – Chetananews.com
विगतमा गरेका काम र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा विजयको आधार : रामजनम चौधरी(अन्तरवार्ता)
१४ मंसिर २०७४, बिहीबार १४:०० 387 पटक हेरिएको
२०३६ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिमा होमिनुभएका रामजनम चौधरीले अहिलेसम्म संसदीय चुनावमा पराजित हुनु परेको छैन । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट पहिलो पटक संसद सदस्यमा निर्वाचित भएपछिका पत््येक निर्वाचनमा उहाँ विजयी हुनभएको छ । २०५४ सालमा सामान्य प्रशासन सहायकमन्त्री हुनुभएका चौधरी धेरै चोटी मन्त्री बन्नुभयो । २०६४ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट अलग्गिएर मधेसी जनअधिकार फोरममा समाहित हुुनुभएका चौधरी ०६६ सालमा विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भएपछि त्यसको महासचिव तथा पछि उपाध्यक्ष बन्नुभयो । केही महिनाअघि फोरम लोकतान्त्रिक नेपाली काँग्रेसमा समाहित भएपछि अहिले उहाँ कांग्रेसबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बन्नुभएको छ । चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त ५६ वर्षीय रामजनमसंग आसन्न आम निर्वाचन, समसामयिक विषयमा मिडिया सेन्टर, प्रदेश नम्बर ७ ले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
चुनावी प्रचार–प्रसार कस्तो भइरहेको छ ?
नेपाली कांग्रेसका मुलभूत एजेण्डा र मैले यस क्षेत्रका लागि गरेका विकास निर्माण सम्बन्धी काम, पुरा गर्न नसकेका विकासका कामहरुमा भएका कमीकमजोरी र यस क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने विकास योजनाबारे आम मतदाताका माझमा गएर जानकारी गराइरहेको छु । क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण इकाई तथा नेता कार्यकर्तासहित व्यापक घरदैलो, साथीभाई भेटघाट, चुनावी सभा, अन्तक्र्रिया लगायतका कार्यक्रम गरिरहेका छौं । यस क्रममा मैले आम मतदाताहरूबाट विगतमा गरेका कामका आधारमा मत दिने खालको प्रतिक्रिया पाए । हामीले यस क्षेत्रका मतदाताहरूसंगको भेटघाट तथा छलफलमा उहाँहरू मैले विगतमा गरेका कामप्रति सन्तुष्ट रहेको अनुभव गरे । यसले हामीलाई निकै उत्साहित बनाइरहेको छ ।
कांग्रेसले तपाईंलाई किन पुनः उम्मेदवार बनायो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
हो, यस क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मभन्दा पनि धेरै सक्षम नेताहरू हुनुूहुन्छ । तर, पार्टीले धेरै कुरा विश्लेषण गरेर मलाई पुनः उम्मेदवार बनाएको होला । मलाई पार्टीले विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाएको छ । र, म त्यो विश्वास टुट्न दिनेछैन ।
तपाईको जीतका आधारहरू के के हुन् ?
नेपाली कांग्रेसको नीति र सिद्धान्त, लोकतन्त्रका प्रतिको अटुट निष्ठा, जनतामाझ हामीले प्रस्तुत गरेका प्रतिवद्धता तथा मैले यस क्षेत्रका लागि लामो समयदेखि गरेको सेवा तथा विकास कार्यका साथै यस क्षेत्रका आदरणीय जनताको मप्रतिको विश्वास नै मेरो मैले यस क्षेत्रका लागि गरेको काम, पार्टीको एजेण्डा र आम मतदाताको मप्रतिको विश्वासनै मेरो जित्ने आधार हुन भन्ने म ठान्दछु । अर्को कुरा यस क्षेत्रमा आम का“ग्रेस नेता कार्यकर्तामा देखिएको अभुतपूर्व एकता र उत्साहले पनि हाम्रो जीत सुनिश्चित गरेको मैले अनुभव गरेको छु ।
तपाईंले यस क्षेत्रका लागि धेरै काम गरेको भन्नुभयो, के के हुन् ?
म स्वास्थ्यमन्त्री ह“ुदाका वेला नै कुरा गरौं । स्वास्थ्यमन्त्री भएको वेला आम नेपालीका लागि नै केही उल्लेख्य काम गरेको छु । जस्तो मुटुको विरामी र क्यान्सरका विरामीको उपचारका लागि एक लाख रुपैयासम्मको सहयोग गर्ने, मिर्गौला खराब भएकालाई जिन्दगीभर निःशुल्क डायलोसिस गर्ने र थारु जातीमा देखिने सिकलसेल एनमियाको उपचारका लागि एक लाख रुपैया“सम्मको निःशुल्क उपचारका साथै देशका चार वटा अस्पतालमा रगत परिक्षण गर्ने मेसिन र सेती अञ्चल अस्पातालमा दुई वटा डायलोसिस मेसिनको पनि व्यवस्था गरे । कैलालीबाटै पहिलोपटक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मेरै पालाबाट शुरु गरेको हो । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी एम्बुलेन्सहरू पनि मेरै पालामा व्यवस्था गरिएको छ । यस क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै बेरोजगार युवाहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीको व्यवस्था पनि म स्वास्थ्य मन्त्री हु“दा गरेको छु । त्यस्तै, म स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला गेटामा मेडिकल कलेज सम्बन्धी फायल अघि बढाए । अहिले मेडिकल कलेज निर्माण कार्यले तिव्रता पाएको छ ।
त्यस्तै, म सांसद भएको बेला यस क्षेत्रमा पा“च वटा सडकको खाका कोरेको थिए । सुखड–भजनी, हसुलिया–मसुरिया, सडकपुर बौनियादेखि जोशीपुर–भजनी, मरियाघाटदेखि चुहासम्म र गुलरियादेखि प्रतापपुरहु“दै मुनुवासम्मको रोडको खाका कोरेको आधारमा अहिले चार वटा सडकको कालोपत्रेको काम भईरहेको छ । सुखड–भजनी रोड पिच भईरहेको छ । साथै टीकापुर–जोशीपुर रोड बनाउन पनि मैले नै पहल गरेको थिए । यो सडकको झवीसम्म कालोपत्रे भईसकेको छ भने अब बाँकी खण्ड पनि कालोपत्रे गरिने छ । त्यस्तै, टीकापुर–जोशीपुर, विजुलीयाहुँदै हसुलिया जोड्ने सडकको खाका पनि अघि बढाएको थिए । त्यस आधारमा कान्द्रा नदीमा पुल बन्न पनि सुरु भएको छ । मैले कैलाली जिल्लामा हुलाकी सडक बन्नुपर्छ भनेर पहल गरे । अहिले यो निर्माण भइरहेको छ ।
त्यस्तै, म भुमिसुधार मन्त्री भएको बेला अव्यवस्थित बसोबास भएका हजारौं सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढाए । थुपै्रले लालपुर्जा पनि पाए, तर अझैं धेरै जनाले पाउन बाकी छ । मुक्त कमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर लालपुर्जा वितरणसंगै अन्य सुविधा तथा अनुदान दिने काम पनि मैले नै पहल गरेको हु । आम जनताले पनि बुझ्नु भएको छ कि रामजनमले मुक्त कमैया,सुकुम्वासी, आदिवासी, जनजाती, दलित, मुस्लिम सहित पछाडि पारिएको वर्ग र समुदायको हितमा काम गरेको छ भनेर ।
तर, तपाई स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा केही स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने भन्नु भएको थियो रे, तर पुरा भएनन् भन्ने आरोप छ नि ?
मैले जनताको आवश्यकता अनुसार केही स्थानमा स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने भन्ने आश्वासन दिएको हुँ । तर, देश संघिय संरचनामा गएको र स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नतीसम्बन्धी स्पष्ट नीति नबनेकाले काम अघि बढाउन कठिनाई भएको हो । तर, मैले जुन स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताल स्तरोन्नती गर्छु भनेको थिए, ती सबैको काम अहिले अघि बढिसकेको छ ।
यस क्षेत्रको समस्या चाहिं के के हुन् ?
यो क्षेत्रको मुख्य समस्या नदी नियन्त्रण हो । मोहना, कान्द्रा, कटैनी, काँडा, घुराहा लगायतका नदीहरूले सयौं मानव वस्तीलार्ई प्रभावित गर्ने गरेको छ । वर्षेनी हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन कटानी हुने गरेका छन् । अन्य कामहरू त बजेट छुट्याएर गर्न सकिएको छ, तर नदी नियन्त्रण सबैभन्दा गाह्रो काम नै हो । मैले सांसद कोषबाट करौडो रुपैयाको बजेट नदी नियन्त्रणका काममा लगाएको छु । त्यस्तै, यस क्षेत्रमा न त उच्च शिक्षाको व्यवस्था छ न त आधुनिक अस्पताल नै । यस क्षेत्रका अधिकांश बस्तीहरु अझै पनि दुर्गम जस्तै छन् । कतिपय ठाउमा नदीमा पुल तथा कल्र्भट नहुँदा एक वस्तीदेखि अर्को बस्तीसम्म जान कठिनाई भोग्नु पर्ने हुन्छ ।
विकास निर्माणका समस्या एकातिर छ भने प्रत्येक वर्गको समस्या अर्को छ । किसानहरुले समयमा मल, विउविजन पाईरहेका छैनन् । महिला, दलित वर्ग अझै सशक्तिकरण हुन सकेका छैन्न । विद्यार्थीहरुले गुणस्तरिय शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । बेराजगार युवाहरूको संख्या निकै बढि छ । अझै केही दुर्गम वस्तीका मानिसलाई स्वास्थ्य उपचार पाउन कठिन छ ।
तपाईको चुनावी एजेण्डा के के हुन ?
मेरो दुईवटा मुख्य एजेण्डा छन् । पहिलो राजनीतिक र दोस्रो आर्थिक मुद्दा हो । गाउँगाउँ जाँदा हामीले पहिला उठाएको आदिवासी, जनजाती, थारु, मुस्लिमको मुद्दालाई जुन संविधानमा अधुरो छ, त्यसलाई संविधान संशोधनमार्फत पुरा गर्ने, आर्थिक विकास र निर्माणमा अघि बढ्ने तथा राष्ट्रलाई दिगो शान्ति तिर लग्ने हाम्रा एजेण्डा हुन् । यी सबै काम गर्न नेपाली काग्रेसको नेतृत्व आवश्यक छ । यो संगै यस क्षेत्रमा गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जनताको आर्थिक विकास लगायत मेरा प्रतिवद्धता हुन् ।